ရှောင်ကြဉ်ရန် ၀ န်ဆောင်မှုဆိုင်ရာစာချုပ်လိမ်လည်မှုအဖြစ်ဆော့ဝဲ ၅ Martech Zone
စနေနေ့, နိုဝင်ဘာလ 9, 2013 သောကြာနေ့, ဇွန်လ 19, 2015 Douglas Karr
ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူများကိုအပြည့်အဝထောက်ပံ့သောအေဂျင်စီတစ်ခုအနေနှင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်သုံးစွဲသူများ၏အားထုတ်မှုများကိုအပြည့်အဝထောက်ခံရန်လျှောက်လွှာများနှင့်ပလက်ဖောင်းများအတွက်စာချုပ်များကိုအနည်းငယ်ဝယ်ယူသည်။ သူတို့အားဆက်ဆံရေးအများစုဟာ တစ်န်ဆောင်မှုအဖြစ် Software များ (SaaS) ရောင်းချသူများသည်အလွန်စိတ် ၀ င်စားပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အွန်လိုင်းတွင်မှတ်ပုံတင်နိုင်သည်။ ပြီးပါကဖျက်သိမ်းနိုင်သည်။ ပြီးခဲ့သည့်နှစ်က, ငါတို့စာသားအတော်လေးကန်ထရိုက်အပေါ်ခေါ်ဆောင်သွားပါတယ်။ နောက်ဆုံးတွင်ပုံနှိပ်ကောင်းသို့မဟုတ်အရောင်းအ ၀ ယ်ဖြစ်ခြင်းကြောင့်ရန်ပုံငွေများစွာဆုံးရှုံးခဲ့သည်။ ငါဒီမှာနာမည်တွေမခေါ်ဘူး၊ ဒါပေမယ့်တချို့ကုမ္ပဏီတွေကတော်တော်လူကြိုက်များတယ်၊ ဒါကြောင့်သတိထားပါ။ ဤအလိမ်လည်မှုများ၏အားသာချက်ကိုယူသောကုမ္ပဏီများသည်ငါ့စီးပွားရေးသို့မဟုတ်ငါ့ထောက်ခံချက်ဘယ်တော့မှလိမ့်မည်။
အနည်းဆုံးစာချုပ်သက်တမ်း - ၀ န်ဆောင်မှုကုမ္ပဏီများအနေဖြင့်အကောင့်စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် onboarding လုပ်ငန်းစဉ်များရှိ ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူသည်သုံးစွဲသူအသစ်ရရှိရန်နှင့်လည်ပတ်ရန်ငွေအမြောက်အများသုံးစွဲသည်။ ငွေအမြောက်အများ - ငါ့ကိုယုံကြည်ပါ အရင် ESP စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက်အလုပ်လုပ်နေတာ၊ သူတို့ရဲ့ပထမ ဦး ဆုံးအီးမေးလ်ကိုဖောက်သည်တစ် ဦး ဆီပို့ဖို့ဒေါ်လာထောင်ချီပြီးသုံးနိုင်တယ်။ ရလဒ်အနေဖြင့်အနည်းဆုံးစာချုပ်အရှည်လိုအပ်ခြင်းသည်ကုမ္ပဏီ၏ကျန်းမာရေးအတွက်အလွန်အရေးကြီးသည်။ ပြproblemနာမှာ SaaS သည်များစွာသောသူတို့သည်ကိုယ်ပိုင်စာချုပ်သက်တမ်းကိုသူတို့၏စည်းကမ်းချက်များဖြင့်ဖုံးကွယ်သွားမည်ဟုဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြသည်။ အကြွေးဝယ်ကဒ်ပြားနှင့်ယနေ့သင့်အကောင့်ကိုစတင်သုံးစွဲခြင်းဖြင့်သင်၏ယနေ့အကောင့်ကိုဖျက်သိမ်းနိုင်သင့်သည်။ စာကောင်းကောင်းဖတ်ပါ ငါတို့လက်မှတ်ထိုးထားတဲ့ SEO အင်ဂျင်ကိုရှာတွေ့ပြီး၊ အနည်းဆုံး ၆ လစာချုပ်ချုပ်ဆိုထားသည့်မျှော်လင့်ချက်များနှင့်မကိုက်ညီသည်။ နိမ့်ဆုံးလိုအပ်ချက်ကသူတို့ရဲ့ပလက်ဖောင်းဟာကတိက ၀ တ်အလွန်အကျွံ၊ မပြည့်စုံသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ဟာဖောက်သည်တွေကိုပိုက်ဆံပိုပေးဖို့လိမ်လည်နေကြတာကြောင့်ပဲ။
ယနေ့လက်မှတ်ထိုးပါ၊ Bill Tomorrow - သင်၏ SaaS အရောင်းကိုယ်စားလှယ်သည်သင်နီးစပ်သည်အထိသင်၏အကောင်းဆုံးသူငယ်ချင်းဖြစ်သည်။ နောက်ထပ်စကားလုံးတစ်လုံးရှိတယ် အရောင်းကတိ ဒါကစာချုပ်တစ်ခုမှာရေးထားတာမဟုတ်ပါဘူး။ အဲဒါaကိုခေါ်တယ် မုသား။ ပြီးခဲ့သည့်နှစ်နှောင်းပိုင်းကအဓိကပလက်ဖောင်းရောင်းချသူနှင့်နှစ်စဉ်စာချုပ်ချုပ်ဆိုခဲ့သည်။ အရောင်း ၀ န်ထမ်းတစ် ဦး သည်ဖိအားများစွာကြုံတွေ့ခဲ့ရပြီးနှစ်အတွက်ကြိုးဝိုင်းအောက်တွင်နီးကပ်စွာနေလိုခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့်သူကကျွန်ုပ်တို့သည်ပလက်ဖောင်းကိုစတင်အသုံးချသည်အထိငွေတောင်းခံမည်ဟုကျွန်ုပ်တို့ကိုကတိပေးခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်လက်မှတ်ရေးထိုးပြီးချက်ချင်းစင်မြင့်ပေါ်တွင်ငွေတောင်းခံလွှာကိုထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ ကျွန်တော်ငွေတောင်းခံလွှာကိုချက်ချင်းမပေးတော့ဘူး၊ သူကငွေကောက်ခံတယ်။ ယခုအခါကုမ္ပဏီများသည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုနှောင့်ယှက်ဖျက်ဆီးနေပြီဖြစ်သည်။ ဒီနေ့အထိငါပလက်ဖောင်းကိုတစ်ခါမှမသုံးဖူးဘူး။ သူတို့လိုချင်ရင်တရားစွဲနိုင်ပါတယ်။ ငါသူတို့ဆီကတစ်ဒေါ်လာရတာထက်တရားဝင်ငွေတောင်းခံတာပိုသုံးမယ်ဆိုတာသေချာတယ်။
ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ - ကျွန်ုပ်နှင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆက်ဆံရေးရှိသည့်ကုမ္ပဏီတစ်ခုသည်လွန်ခဲ့သောနှစ်နှစ်ကမှသူတို့နှင့်စာချုပ်ချုပ်ဆိုရန်ကျွန်ုပ်အားအားပေးခဲ့သည်။ အေဂျင်စီစာချုပ်အရကျွန်ုပ်တို့သည်အနည်းဆုံးလစဉ်ကြေးပေးရမည် ဖောက်သည်တစ် ဦး လျှင် လက်လီကုန်ကျစရိတ်၏လျှော့စျေးလစဉ်ကြေး၏ ၇၅% ခန့်သည်လျှော့စျေးလစာဖြစ်သည်။ အေဂျင်စီအထုပ်သည်ကျွန်ုပ်တို့အားပရီမီယံထောက်ခံမှု၊ အင်္ဂါရပ်များအားလုံးကိုအပြည့်အဝလက်လှမ်းမီမှု၊ ထုတ်ကုန်အကြံပေးကော်မတီတွင်ထိုင်ခုံနှင့်သူတို့၏ site ပေါ်တွင်လုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိသည့်ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်စာရင်းသွင်းခွင့်ရစေသည်။ ၎င်းသည်ပြီးပြည့်စုံသောသဘောတူညီမှုတစ်ခုဟုထင်ရသည် - ကျွန်ုပ်တို့ဖောက်သည်များထံမှပံ့ပိုးမှု ၁၀၀% ထောက်ပံ့ပေးရသည်ကိုကျွန်ုပ်တို့ဖတ်ရှုသည်အထိ။ ရိုးရာ - အဲဒီမှာပါပဲ ကုန်ကျစရိတ်အားလုံး ! ငါဆက်ကပ်အပ်နှံထောက်ခံမှုန်ထမ်းမတတ်နိုင်ခြင်းနှင့်ဆက်ဆံရေးကနေအမြတ်အစွန်းကိုတတ်နိုင်နိုင်ဖို့ဖောက်သည်များစွာလက်မှတ်ထိုးခဲ့ကြလိမ့်မယ်။ ဖောက်သည်များကိုဤ ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူအား ဆက်၍ ရည်ညွန်းမည်။ သို့သော်အေဂျင်စီစာရွက်စာတမ်းကိုကျွန်ုပ်တို့မည်သည့်အခါမျှလက်မှတ်ထိုးမည်မဟုတ်ပါ။
အသုံးပြုမှုနှင့် Overage အခကြေးငွေ - ဆော့ဖ်ဝဲကုမ္ပဏီများသည်သူတို့၏အသုံးပြုခအတွက်အလွန်ပွင့်လင်းမြင်သာကြသည် အလွန်အကျွံ အခကြေးငွေ။ Amazon နှင့်တူသောမော်ဒယ်များကိုအသုံးပြုခြင်းအတွက်အခကြေးငွေ ပေး၍ သင်တို့၏ platform များကိုအသုံးပြုလေလေ၊ ကုမ္ပဏီများကြိုက်သည် တီးဝိုင်း သင်ပို့သောမှတ်တမ်းများနှင့်အီးမေးလ်အရေအတွက်ပေါ် မူတည်၍ သင်၏စာချုပ်အပေါ်တွင်သင့်အားတက်သွားအောင်သို့မဟုတ်လျှော့ချနိုင်သည်။ သင်ပိုမိုပေးပို့လေပို့လွှတ်မှုနှုန်းနိမ့်လေဖြစ်သည်။ အခြားကုမ္ပဏီများကသင့်ကိုအသုံးပြုမှုအတွက်သင့်ကိုအမှန်တကယ်အပြစ်ပေးသည်။ ကြီးမားသောအတွင်းပိုင်းစျေးကွက်ရှာဖွေရေးပလက်ဖောင်းကကျွန်ုပ်တို့၏အဆက်အသွယ်များအားလုံးကိုသူတို့၏စနစ်အတွင်းသို့တင်ပို့သောအခါကျွန်ုပ်တို့၏ကုန်ကျစရိတ်ကိုလေးဆတိုးမြှင့်ပေးသည်ဟုကျွန်ုပ်တို့အားအသိပေးခဲ့သည့်အတွက်အံ့အားသင့်ခဲ့ရသည်။ အရောင်းလုပ်ငန်းစဉ်၌ဆွေးနွေးတင်ပြထားသည် (၄ င်းတို့၏ site ပေါ်တွင်ထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့သော်လည်းကျွန်ုပ်တို့လွဲချော်ခဲ့သည်) ။ အခြားကုမ္ပဏီများသည်သင်၏စနစ်ကိုအသုံးပြုခြင်း (bandwidth, account, emails, campaigns, etc) ကိုကျော်လွန်သောအခါတန်ဖိုးဖြတ်သည်။ အသုံးပြုမှုနှင့်အလွန်အကျွံအခကြေးငွေရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအပေါ်သင်ပြန်လာနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါနှင့်အသုံးပြုမှုကိုတားဆီးထက်စနစ်၏အသုံးပြုမှုကိုအမှန်တကယ်အားပေးကြောင်းသေချာပါစေ။
အလိုအလျောက်သက်တမ်းတိုး - ငါသူတို့ဆော့ဖ်ဝဲကိုစမ်းသပ်ဖို့ငါနှင့်အတူလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကုမ္ပဏီများမှငါသည်သင်တို့ကိုအကြိမ်ပေါင်းများစွာဝမ်းခွဲဘယ်လောက်ငါသည်သင်တို့ကိုမပြောနိုင်ပါ, ငါကဖျက်သိမ်း, ပြီးတော့လာမည့်လတွင်ငါနောက်တဖန်စွဲချက်တင်ခဲ့သည်။ ကုမ္ပဏီရဲ့အရွယ်အစားကအရေးမကြီးပါဘူး။ သေးငယ်တဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုတွေ၊ ကန်ထရိုက်စာချုပ်များကိုအလိုအလျောက်သက်တမ်းတိုးပါကကြိုတင်စစ်ဆေးပါ။ သက်တမ်းတိုးရန်အစီအစဉ်မရှိပါကကုမ္ပဏီသည်သင်၏ခွင့်ပြုချက်လိုအပ်သည်ကိုသေချာအောင်လုပ်ပါ။
ကန်ထရိုက်များ၊ ၀ န်ဆောင်မှုဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းများနှင့်ငွေတောင်းခံသည့်စည်းမျဉ်းများသည်ရောင်းချသူနှင့်သင်၏ဆက်ဆံရေးကိုနားလည်ရန်အလွန်အရေးကြီးသည်။ သင်၏စာချုပ်ချုပ်ဆိုမှုနှင့်ပတ်သက်ပြီးဘာတွေဖြစ်နေသလဲဆိုလျှင်သင်၏ကုမ္ပဏီသည်ဤပြissuesနာများနှင့်ရင်ဆိုင်ရလျှင်ရောင်းချသူနှင့်ဆက်ဆံရေးမည်သို့ရှိမည်ကိုရှာဖွေပါ။
ဖျက်ခြင်း - သင် Saas ပလက်ဖောင်းကိုမလိုအပ်တော့ပါ။ Self-service ကုမ္ပဏီများသည်ပုံမှန်အားဖြင့်ရက် ၃၀ ကြိုတင်အကြောင်းကြားစာသို့မဟုတ်၎င်းတို့၏ပလက်ဖောင်းမှတစ်ဆင့်ချက်ချင်းဖျက်သိမ်းခြင်းပင်ပြုလုပ်လိမ့်မည်။ အွန်လိုင်းခရက်ဒစ်ကဒ်ဖြင့်သင်စာရင်းသွင်းထားသောကုမ္ပဏီကိုသတိပြုပါ၊ သို့သော်သင်၏အကောင့်ကိုရပ်ဆိုင်းရန်ဖုန်းကိုဖုန်းဆက်ပါ။ အွန်လိုင်းငွေတောင်းခံမှုကိုရပ်ရန်လွယ်ကူသကဲ့သို့၎င်းသည်အွန်လိုင်းငွေတောင်းခံမှုကိုရပ်ရန်လွယ်ကူပါသည်။ ညှိနှိုင်းတိုင်ပင်ခြင်းနှင့်အထောက်အပံ့ပေးခြင်းရှိသောကုမ္ပဏီများအတွက်အနည်းဆုံး ၆ လစာချုပ်များသည်ပုံမှန်ဖြစ်သည်။
အသုံးပြုမှု - သင်အသုံးပြုမှုသိသိသာသာပြောင်းလဲနိုင်သည် - တိုးမြှင့်ခြင်းသို့မဟုတ်လျော့နည်းခြင်း။ သင့်ကိုစနစ်တစ်ခုကိုအသုံးမပြုခြင်းသို့မဟုတ်အနည်းဆုံးအသုံးပြုခြင်းအတွက်လျှော့ချသင့်ပြီးဆော့ဖ်ဝဲပလက်ဖောင်းကိုအလွန်အကျွံအသုံးပြုခြင်းအတွက်သင့်ကိုအပြစ်ပေးသင့်သည်။ စျေးနှုန်းများကိုအသုံးပြုမှုအတွက်ညှိနှိုင်းသင့်သည်။ သင်၏စနစ်ကိုသင်ပိုမိုအသုံးပြုလေရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအပေါ်သင်၏ပြန်လည်အမြတ်ငွေတိုးလာလိမ့်မည်။
အဆင်သင့်မှာရှေ့နေထားရှိခြင်းသည်အမြဲတမ်းအကောင်းဆုံးအစီအစဉ်ဖြစ်သည်! ငါတို့တွေစိတ်ပျက်အားငယ်ခဲ့ရတဲ့အကြိမ်ပေါင်းများစွာကစိတ်ကူးယဉ်ရှေ့နေများကစာချုပ်မချုပ်နိုင်ခဲ့လို့ပဲ Castor Hewitt alerding.
Tags: အေဂျင်စီလိုင်စင်အေဂျင်စီစျေးနှုန်းငွေတောင်းခံငွေတောင်းခံဝေါဟာရများစာချုပ်လိမ်လည်မှုကန်ထရိုက်စာချုပ်များနှုန်းကုန်ကျအလွန်အကျွံအခကြေးငွေအချစ်၀ န်ဆောင်မှုတစ်ခုအနေဖြင့် software ကိုအသုံးပြုသည်software အသုံးပြုမှုသတ်မှတ်ချက်များအသက်မပြည့်သေးသောအခကြေးငွေများ
အွန်လိုင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများသည်စျေးကွက်ကို ဦး တည်နေရန်စျေးကွက်ကိုပြောင်းလဲရန်လိုအပ်သည်
ဒေတာ - Driven စျေးကွက်တက်အပူ!